Thursday, 20 Dec, 2018 1:43 PM
५ पुस, काठमाडौं । मोबाइल बिना मानिसको दैनिकी कल्पना गर्न मुस्किल पर्ने दिन आइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल दैनिक काममा अपरिहार्य पनि बनेको छ । अब मोबाईलको महत्व केबल फोन सम्पर्कका लागि मात्रै पनि रहेन । इन्टरनेटको दुनियाँमा मोबाइलभित्रै विश्व कैद भइसकेको छ । त्यसैले मोबाइलबाटै विश्व घुम्न र बुझ्न सक्छ मानिस । यसकारण पनि मान्छे अहिले महँगो र सुविधायुक्त मोबाइलमा आकर्षित छ । मोबाईलमा महत्वपूर्ण डाटा, सम्पर्क नम्बर, तस्बिरदेखि भिडियोलगायत धेरै कुरा हुन्छ । तर, जब मानिसको त्यो मोबाईल हराउँछ अथवा टुटफुट हुन्छ, त्यतिबेला निकै तनावमा आउँछ । एकातिर मोबाईल हराउनुको पीडा, अर्कातिर त्यसमा भएका सम्पर्क नम्बर र डाटा हराएपछि तनाव नहुने कुरै भएन । तर, अब विदेशमाजस्तै नेपालमा पनि मोबाईल इन्स्योरेन्स र त्यससँगै हुने डाटा सुरक्षा गर्न सकिने भएको छ । मेरो सुरक्षा प्रालिले प्रिमियर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा मोबाईल इन्स्योरेन्स गर्दै आएको छ । मोबाईल सुरक्षा, इन्स्योरेन्स र डाटा रिकभरीका विषयमा हामीले मेरो सुरक्षा प्रालिका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत प्रेम सुनारसँग कुराकानी गरेका छौँ :
तपाईहरूले ‘मेरो सुरक्षा’ भन्दै मोबाईल इन्स्योरेन्सको विषयमा आक्रामक ढंगले ब्राण्डिङ र मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ, यो कस्तो खालको इन्स्योरेन्स हो ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो मोबाईलको इन्स्योरेन्स हो । हामी मोबाईलको इन्स्योरेन्स गछौँ । इन्स्योरेन्स भनेपछि सबैलाई थाहा हुन्छ । हामीले मोबाईल सुरक्षा किन भन्यौ भने हामी मोबाईल इन्स्योरेन्स कम्पनी होइन, हामी इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग टाइअप गरेर कस्टमरको मोबाईललाई इन्स्योरेन्स गछौँ । हामीसँग इन्स्योरेन्स गरिसकेपछि कस्टमरले मोबाईल हराए, चोरी भए, फुटे तथा आगलागीमा परे हामीमार्फत कम्पनीले बाचा गरेका क्षतीपुर्तिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
नेपालमा पहिलो पटक सुरू गर्नुभएको छ ? कसरी आयो मोबाईल सुरक्षाको विषयमा धारणा ?
विश्वका अधिकांश देशमा मोबाईल इन्स्योरेन्सको सुविधा छ । नेपालमा भने यो पहिलो नै हो । मानिसको अत्यावश्यक बनेको मोबाईल हराउँदा, त्यसमा रहेको डाटा गायब हुँदा समस्या नआओस् भनेर हामीले यो अवधाराणा ल्याएका हौं । नेपालका मोबाइल ग्राहकलाई पनि यसको आवश्यकता छ । नेपालमा अरु ईन्स्योरेन्स कम्पनीले मोबाईल इन्स्योरेन्सको अवधारणा नलिएको हुनाले हामीले यसको आवश्यकता देख्यौँ र मोबाईल सुरक्षाकोे अवधारणा लिएर आएका हौँ ।
नेपालमा पहिलो पटक मोबाईल सुरक्षाको अवधारणा त ल्याउनुभयो, यसको सम्भावित बजार कस्तो देख्नुभएको छ, मार्केट रिसर्च पनि गर्नु भयोहोला ?
हामीले यो अवधारणालाई लञ्च गर्नभन्दा एक वर्ष अगाडिबाट रिसर्च गरेका थियौं । यसको संभाव्यता, चुनौति, यसमा हुने खतरा, सबैलाई मूल्यांकन गर्दा यसको ठुलो आवश्यकता महशुस गर्यौँ । चुनौति पनि त्यस्तै नै थियो । नेपालजस्तो देश जहाँ मोरल हजार्डहरु धेरै छ, त्यस्तो ठाँउमा मोबाईल इन्स्योरेन्स लिएर आउनु ठुलो कुरा हो । यसको मार्केट अपरचुनिटी, ग्राहक भनेका नेपाली जनता हुन् जसको हातहातमा मोबाईल छ । प्रत्यक वर्ष ७० देखि ८० लाख मोबाईल बिक्छ भने यस्तो ठाउँमा मोबाईल सुरक्षाको आवश्यकता पनि छ । यही मार्केट देखेर सुरू गरेका हौँ ।
नेपालमा यति धेरै ईन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, उनीहरुले मोबाईल इन्स्योरेन्सको पोलिसी ल्याएका छैनन् । तपाईको विचारमा कारण के होला ? जोखिम बढी देखेर हो कि ?
हो, यसमा जोखिम पनि बढी छ । मेरो विचारमा यसमा मेकानिजम धेरै छ । नेपालमा भइरहेका इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग त्यस्तो मेकानिजम छैन । उहाँहरू चलिआएकै ढाँचाबाट जानुभयो । हामीले भने अध्ययन गरेर सम्भाभित जोखिमलाई कम गर्ने समूह तयार पारेर नै यसमा आएका हौँ ।
इन्स्योरेन्स गरेको मोबाईल हरायो भन्ने र दाबी गर्ने खतरा पनि हुन्छ होला । कसैले हरायो, अथवा आफैँ टुटफुट गरेर झुटो दाबी गरेको हो वा होईन, पत्ता लगाउने मेकानिजम के हुन्छ ?
हामीसँग आफ्नै सफ्टवेयरहरु छन् । कसैले झुटो दाबी गरेको हो÷होइन सजिलै पत्ता लाग्छ । हामीसँग त्यो पत्ता लगाउने बलियो मेकानिजम छ ।
विदेशमा इन्स्योरेन्स गरेका मोबाईल नेपालमा ल्याएर अनलक गर्ने र चलाउने क्रम पनि बजारमा छ । नेपालबाट पनि बाहिर लगेर बेच्ने अनि दाबी गर्ने खतरा कत्तिको छ ?
यस्तो अवस्थामा हामीले पनि रिइन्स्योरेन्स गरेका हुन्छौँ । यस्तो अवस्था आउँदैन । त्यसमा हामी सचेत छौँ र त्यहि अनुसारको तयारी र ब्याकअप हामीसँग छ । हामी ढुक्क छौं ।
नेपालमा पछिल्लो समय महँगा मोबाइल बोक्ने चलन बढेको छ । तर, मोबाईलको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना कत्तिको पाउनुभयो ?
नेपालमा इन्स्योरेन्स प्रति धारणा अलि नकरात्मक रहेछ । इन्स्योरेन्सको क्लेम गर्दा कम्पनीले झन्झट गराउँछ भन्ने जन गुनासो छ । यो चाहीँ हाम्रो लागि अलि जोखिम हो । जोखिम छ भन्दैमा बजारमा नआउने पनि होईन । हामीले जनमानसमा भएका इन्स्योरेन्सप्रतिको नकारात्मक धारणालाई हटाउन बिभिन्न कदम चालेका छाँै । एक एकलाई भेट्दै यसको फाईदा बताउने, मार्केटिङ, प्रोगामिङ, ब्राण्डिङबाट सम्झाउने गरेका छौँ । शिक्षित र एकपटक मोबाईल हराईसकेका व्यक्तिलाई त सम्झाउनु पर्दैन । तर, आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । मोबाइल इन्स्योरेन्स त्यति महँगो पनि छैन ।
तपाईंले यो अबधारणा लिएर आऊनुभन्दा अगाडिको योजना र अहिलेको बजारमा पाउनुभएको अनुभव कस्तो छ ?
सोचेको भन्दा बिल्कुलै फरक । सोचेको भन्दा बढी नै मेहनत गर्नु परेको छ । यो सस्तो र नयाँ अबधारणा भएका कारण राम्रो होलाजस्तो लाग्थ्यो, तर इन्स्योरेन्सप्रतिको चेतनाको कमिले सोचेजस्तो भएको छैन । हामीले सोचेको लेभलमा पुग्न अझ एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ला ।
मेरो सुरक्षामार्फत कस्ता–कस्ता मोबाईलको इन्स्योरेन्स गर्न सकिन्छ ?
कुनै पनि एन्ड्रोइड मोबाईल अथवा स्मार्ट फोन अथवा आईफोन इन्स्योरेन्स गर्न सकिन्छ । स्मार्ट फोन छ भने मोबाईलको मूल्य जति भए पनि फरक पर्दैन ।
मानिसले आफ्नो मोबाईलको इन्स्योरेन्स कसरी गर्न सक्छ ? कहाँ र कसरी गर्ने ?
अहिले हाम्रो सेवा उपत्यकामा मात्र सुरु गरेका छाँै । उपत्यकाबाहिर छिटै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । यसमा अनलाइन र अफलाइन दुबै तरिकाबाट इन्स्योरेन्स गर्न सकिन्छ । नयाँ मोबाईल किन्ने हो भने मोबाईल किन्ने पसलमा यो सेवा उपलब्ध छ । यदि मोबाईल किनिसक्नु भएको छ र इन्स्योरेन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर मोडल नं. सेलेक्ट गरेर विवरण भर्ने र इसेवा, खल्तीजस्ता पेमेन्ट गेटवे तथा विभिन्न कमर्सियल बैंकका इबैंकिङ र मोबाईल बैंकिङमार्फत् रकम भुक्तानी गरेर इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको भेरिफिकेसन भएपछि हाम्रो भेरिफिकेसन टिमबाट फोन आउँछ । त्यसपछि इन्स्योरेन्स एक्टिभ हुन्छ ।
इन्स्योरेन्स गर्न कति रकम लाग्छ ?
इन्स्योरेन्स गर्दा तपाईको मोबाईलको मूल्यको ५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि २० हजारको मोबाईल हो भने वार्षिक एक हजार रूपैयाँ तिरेर इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुनेछ ।
कुन–कुन अवस्थामा इन्स्योरेन्स दाबी गर्न पाईन्छ ? कस्तो अवस्थामा नयाँ पाइन्छ, कस्तो अवस्थामा मर्मत हुन्छ ?
तपार्इंले मोबाईल हराउनुभयो अथवा चोरी भयो भने नयाँ पाउनुभयो । इन्स्योरेन्स पोलिसी लिदाँ नै यसको सम्पूर्ण जानकारी दिइन्छ । मोबाईलमा दिईने वारेन्टि बाहेकका हामी गर्छौँ । टुटफुट भएको, पानीमा परेको अथवा कुनै तरल पदार्थ पोखिएको अवस्थामा सुरुमा मोबाईललाई बनाउन कोसिस गछौँ । यदि बनेन भने नयाँ दिन्छौँ । यसमा आगलागी र पानीबाट क्षति, मोबाईल हराउँदा, चोरी हुदाँ, मोबाईल फुट्दा हुने क्षति हामी बेहोर्छौँ ।
मोबाईल इन्स्योरेन्स गर्न आम मानिसको सहभागिताको दर कस्तो छ ?
अहिले धेरै राम्रो छ । सुरुमा दिनको दुई चार जनाले मात्र इन्स्योरेन्स गर्नुहुन्थ्यो । अहिले दिनको दुई देखि चार सयजनासम्म इन्स्योरेन्स गर्न आउनुहुन्छ ।
विशेषगरी कस्ता मोबाईल बढी मात्रामा इन्स्योरेन्स गर्न रूचाउँदा रहेछन् मान्छे ?
धेरै मूल्य परेका मोबाईलहरु नै बढी इन्स्योरेन्स हुन्छन् । साथै इन्स्योरेन्स गर्नु पर्छ भन्ने चेतना भएकाहरु बढी आउनु हुन्छ ।
तपाईहरूले इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी टाइअप गर्नुभएको छ ?
हामीले प्रिमियम इन्स्योरेन्ससँग टाइअप गरेका छौं । ग्राहकको मोबाइल हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि त्योे रिइन्स्योरेन्स हुन्छ, प्रिमियम इन्स्योरेन्सँग । इन्स्योरेन्स गर्ने प्रत्येकलाई प्रिमियम इन्स्योरेन्सको सेफ सर्टिफिकेट आउँछ ।
तपाईहरूले सेवा सुरू गरेदेखि अहिलेसम्म मोबाईल इन्स्योरेन्सको दाबी गर्न कत्तिको आएका छन् ?
आउँछ । आइरहेको छ । अहिले सम्म २० वटा जति क्लेम सेटल भइसक्यो ।
खासमा मोबाइलको इन्स्योरेन्स चाहिँ किन गर्ने ?
अहिलेको अवस्थामा मोबाइल अपरिहार्य भइसक्यो । मोबाइल बिना एकछिन पनि बस्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो । यसमा अत्यावश्यक डाटा, सम्पर्क नम्बर राखिन्छ । यो हराउँदा एकातिर महँगो मोबाइल हराउनुको पिडा हुन्छ, अर्कातिर त्यसमा भएका डाटा, तस्बिर, सम्पर्क नम्बर हराएर धेरै समस्या पर्छ । तर मोबाईल इन्स्योरेन्स गरेपछि मोबाईल पनि पाउनुभयो, त्यसमा भएका म्यासेज, सम्पर्क नम्बर, तस्विरलगायतका डाटा पनि पुनः आउने भएकाले तपाईं कुनै समस्यामा पर्नु भएन । त्यसकारण मोबाईल इन्स्योरेन्स गर्न आवश्यक छ ।
तपाईले डाटाको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्नुभयो, मोबाईलका डाटा अरूले हेर्ने, दुरूपयोग गर्ने खतरा हुँदैन ?
हुँदैन । ग्राहकले एउटा कोड प्राप्त गर्छन् । त्यहि कोड प्रयोग गरेर नयाँ मोबाईलमा डाटा रिकभर हुन्छ । यसमा अरूले हेर्न मिल्ने, दुरूपयोग गर्ने भन्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । उहाँहरुले आफैँ डाटा रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ ।
अहिले त तपाईहरू मोबाईल इन्स्योरेन्स गर्ने एक्लो कम्पनी हुनुहुन्छ । यसमा ठुलो मार्केट देखेर अरू प्रतिस्पर्धी आउने सम्भावना र तपाईहरूको तयारी कस्तो छ ?
हामी यसमा तयारीका साथ नै आएका छौँ । यदि कोही नयाँ कम्पनी यसमा आउन चाहानुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ । नयाँ कम्पनी आउनु भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । अहिले हामी एक्लैले इन्स्योरेन्सको जानकारी गराईरहेका छौँ । नयाँ साथी आउनुभयो भने बजार विस्तार छिटो हुन्छ । ठुलो बजारमा प्रतिश्पर्धीहरु आउँदा फाइदा नै हुन्छ ।